တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အနီးကပ်ဓာတ်ပုံတွေရရှိဖို့ ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်ခဲ့ရသလဲ ??? | သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတ နှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)
Home / featured / တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အနီးကပ်ဓာတ်ပုံတွေရရှိဖို့ ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်ခဲ့ရသလဲ ???
တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အနီးကပ်ဓာတ်ပုံတွေရရှိဖို့ ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်ခဲ့ရသလဲ ???
Staff Writer 11:55 featured Edit
ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ကတော့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အနီးကပ်ဓာတ်ပုံတစ်ခုကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် သက်စွန့်ဆံဖျား အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ သားရဲကောင်ကြီးတွေရဲ့ မျက်နှာလေးတွေဟာဆိုရင် အနီးကပ်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အတော်လေးကို ချစ်စရာကောင်းသွားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
Land Rover ကားတစ်စီးဘေးမှာ သံလှောင်အိမ်တစ်ခုကို ချထားပြီး ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ သားကောင်ကြီးတွေ အနားရောက်အလာမှာ အမိအရ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်သံတင်ဆက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Simon King ဆိုသူဟာ လှောင်ချိုင့်တွင်းကနေ ကြံ့ ၊ ကျားနဲ့ ကျားသစ်တို့လို တောကောင်ကြီးတွေရဲ့ မျက်နှာကို အမိအရရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။